Ny dian'ny fitadiavana asa - asa - Karama - Travel
Tanàna mahagaga ny tanànan'i Dubai!
Ny dia ny fihazana asa - Jereo ny ambany eto amin'ny ampahany iray!
Ankehitriny miverina amin'ny tanjona lehibe amin'ny fitsidihako, ny fitadiavana asa. Tao anatin'ny roa herinandro dia tsapako fa tsy araka ny nampanantenaina ny zava-misy, dia tsy maintsy mitady ilay asa aho rehefa mipetraka any. Tena nahagaga ahy izany saingy tsy azo nolavina ny zava-misy. Taorian'ny roa volana nijerena azy, nahazo antoka aho fa hahita zavatra tsy ho ela ary te hanao veloma haingana amin'ireo mpampiantrano ahy haingana araka izay azo atao aho. Tsy te-ho enta-mavesatra ho azy ireo aho na dia mbola tsy nahatsapa hoatr'izany aza aho, tsy nahazo aina aho. Nivezivezy tao amin'ny tambajotra sosialy sy matihanina ny CV-ko, nandamina gazety tao amin'ny toerana tsy maintsy nanasako ny asa mety ho ahy izy ireo izay mifanaraka amin'ny mombamomba ahy. Vao vao fiandohana izany.
Ny fifamoivoizana momba ny asa dia nila fitaovana fifandraisana, noho izany antony izany no nividianako ny tambajotra finday ho ahy, ny orinasa vao navoaka tamin'izany dia DU. Raha nitsidika ny visa aho, dia mety ho sarotra tamiko ny nividy sim. Raha nifidy ny tambajotra aho dia nandeha tany Etisalat. Satria i Etisalat no tambajotra tokana teo aloha, izay nanangana ny tambajotra nanerana ny Afovoany Atsinanana. Fa ny miaramilako dia nisafidy DU ho ahy ary nirakitra ny zavatra tena ilaiko amin'ny fifandraisana izany. Ka dia tsara ho ahy izany.
Tamin'izany fotoana izany aho dia nanana traikefa niasa tamin'ny hany varotra fitetezam-paritany, ka ny tanjoko dia ny hananana asa ao amin'io sehatra io ihany. I Abu Dhabi no lasako indrindra raha nipetraka tao aho. Satria ny UAE no firenena be mpitsidika indrindra ary isaky ny fara tampony ny hetsika mpizahatany ka nahafahako nahazo ny asa aho. Noho io tanjona io dia nitsidika toeram-pivarotana Meks, Suqs aho izay nahitana ireo biraon'ny mpitsangantsangana. Nozaraiko amin'ny kaplet na flyer ny CV ahy. Manelingelina sy manelingelina ho ahy izy raha fangatahana kaonty asa amin'ny fivarotana fivarotana izay nananako ny traikefa, nanontaniana momba ny fahaiza-manao izay tsy nisy aho ary ny fivarotana izay tsy nahitana ny fahaiza-manao dia ny zavatra niainana, izay tsy nanana J. Na izany na tsy izany dia valim-bavaka mahazatra amin'ny fangatahako.
Rehefa tapitra ny fiezahako voalohany dia nanova ny tetikadiko aho, ary nanitatra ny fikarohana nataoko ary nitady asa tany an-tsaha fa tsy ny fivarotana varotra. Ny orinasam-pamokarana hafa dia ny orinasam-pifanakalozan-kevitra, izay mifototra amin'ny sokajy samihafa Ny fitsangatsanganana, fifanakalozana vola ary ny fananan-tany dia ny fivarotana azy ireo voalohany. Nanandrana ny vintana aho saingy indrisy fa ny vokany dia mitovy.
Nanjary sahiran-tsaina isan'andro aho, tsy nisy na inona na inona nitranga teo am-piandrasana. Nandeha aho isan'andro isan'andro amin'ny aterineto mba hampihatra amin'ny aterineto, ka hanatitra ny CV aho, hanamarina ny fisian'ny boka vaovao. Nankany Danata, biraon'ny Emira Arabo ao Abu Dhabi aho, nanantena fa hahazo valiny mahafa-po. Tao amin'ny hafanam-pandriampahaleman'i Abou Dhabi dia nandeha teny an-dalana aho. Adinoko ny antony ankehitriny fa fantatro ny tanjona, izay tokony ho lasa anisan'ity fiarahamonina matanjaka ity.
Nanitatra ny fitadiavako fikarohana aho avy any Abu Dhabi ho any amin'ny fanjakana hafa ao UAE aho. Nitsidika an'i Sharjah, Al Ain, Ras Al Khaima ary Dubai mazava ho azy aho. Hitako, ankoatra an'i Abu Dhabi, Dubai sy Sharjah dia tena manjombona ny fahafahan'ny asa any amin'ny firenena hafa. Koa nifantoka tamin'ny filazan'ny 3 aho, Abu Dhabi dia nijanona ho laharam-pahamehana. Ankehitriny rehefa miverina aho dia mahatsapa fa nanao zavatra hafakely aho raha ampitahaina amin'ny fiainako tany Lahore, Pakistan. Tena saro-kenatra aho ary tsy dia fahita firy aho nandao ny tanàna. Saingy tany UAE aho dia niady ho teratany. Nandeha irery avy any amin'ny fanjakana iray aho mba hitadiavana asa. Fotoana nahafa-po ahy izany.
Ny fiatrehana ny làlan'ny UA E dia mbola tsy nahatsiaro ho reraka mihitsy, satria ny trano sy ny kolontsaina mirongatra dia naneso ahy nandritra ny diako. Te hankafy ny fotoana rehetra aho saingy ny fahatsapana ny tahotra dia nitifitra teo amin'ny hazondamosiko satria ny ezaka nataoko dia tsy nahitana vokatra. Ny fahaverezan'ny fotoana sy ny vola dia mampatahotra ahy. Namela fiainana miaina tany Pakistana aho tamin'ny fananganana ny nofiko. Te-ho anisan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena aho izay hianarako ny soatoavina kolontsaina hafa sy hampihatra ny fiainako.
Ny fianarako ny zavatra niainako dia toa tsy nisy na inona na inona tany UAE fa kivy sy very fanantenana aho. Ny fanantenako rehetra dia manjavona eo anoloako.
Araka ny filazana fa olona matavy no mitatao amin'ny mololo dia alefa any amin'ny orinasa iray logistics aho amin'ny alàlan'ny famandrihana ireo mpampiantrano ahy. Ny olona nantsoina ahy dia mpitantana ny orinasa ary i Pakistani ihany koa izay niaraka tamin'ny havany dia nifindra tany UAE tamin'ny 1980s. Nitady fialokalofana tany Emirà Arabo mitambatra izy ireo mba handosirana ny fanafihan'ny mpitondra miaramila jeneralin'i Zia tamin'izany fotoana izany.
Ankehitriny dia niverina tany amin'ny orinasa, niatrika raharaham-barotra ny cranes. Manome vina amin'ny tranokala fanorenana. Fivarotam-pivoarana izany satria ny rafitra tsy misy mijanona ao UAE dia nihaona tamin'ny olona malemy fanahy. Nomeny andraikitra aho tao amin'ny departemantan'ny kaontin'ny orinasa. Ny birao dia tao Dubai, iray amin'ireo tilikambo goavana izay tsy nahitana ny tampony na dia nitodika tamin'ny loko 90 aza aho. Tao amin'io orinasa lehibe io dia nanana efi-trano 4 ny efitranony. Tany aho no nihaona voalohany teo amin'ny fiainako Baloch (faritanin'i Pakistan). Olona tena mahafinaritra izy. Nandray ahy tamin'ny tanana roa izy. Ny fahadisoam-panantenana rehetra henoko momba an'i Baloch dia nandositra fotsiny. Angamba io olona io dia teo ambany fiantraikan'ny kolontsaina ao UAE ihany koa. Izany no tena niainako tany amin'ny arabe sy arabe any Emirà Arabo mitambatra & aty amin'ny birao sy ny fiainana matihanina. Toy ny mpanoro hevitra ahy izy. Nampianariny ahy ny rindrambaiko fitantanana ampiasain'ny orinasa dia ny Peachtree, tsy tsaroako izany izao. Fahatsapana tsara izany, ny ekipan'ny birao dia Pakistaney indianina vitsivitsy sy Phillipinos. Tsy maintsy mitanisa ireo olom-pirenena UAE aho fa tian'i Phillipinos ho toy ny mpiasa an-trano ho azy ireo amin'io fotoana io. Tsy azoko an-tsaina hoe mety ho asa mendri-pitokisana kokoa izy ireo, tsy misy dikany.
Ny andro niainako tamin'ny 4 tao amin'io birao io. Natolotra ny AED 2,500 isam-bolana aho, izay handraisan'izy ireo ny AED 200 isam-bolana amin'ny fandaniana visa. Ny fandraisam-bahiny sy ny fitaterana avy any amin'ny toeram-piasana sy ny birao dia nomen'ny orinasa. Tsy nahafa-po ahy izany, satria tsy araka ny nantenaiko. Ny ora fiasana dia nanomboka tamin'ny 7 am ora ho amin'ny 7 pm miaraka amin'ny fiatoana 2 ora isan'andro izay tokony hatao ao amin'ny birao, toy ny tsy misy na inona na inona atao mandritra ny andro mafana ny andro.
Ho an'ny visa dia nanolotra ny soso-kevitr'izy ireo aho mba hivoaka ny mari-pahaizana avy amin'ny fifindra-monina any amin'ny faritr'i Keesh ary hiditra amin'ny visa momba ny asa amin'ny 2 taona maro, dia voalaza fa fomba fanao mahazatra izany. Fonenan'ny trano fonenana ao Sharjah nozarain'ny olona 12, trano fandroana 2 ho an'ny rehetra. Tsy nisy ny tsiambaratelo. Ny fitateram-birao dia nokasaina handefa ny birao amin'ny 6 ama mba hanangonana ilay fiaramanidina izay tsy maintsy vonona alohan'ny 6 noho izay tokony hitantanana sy hanombohana ny andro amin'ny 5 am. Voalohany dia ny fitsipika maimaim-poana voalohany no nampiharina tamin'ny fampiasana efitra fandroana. Mbola nanelingelina ahy ihany ity hetsika hafahafa ity ary toy ny tsy hafahako tamin'ny tolotra, dia nahatonga ahy hieritreritra fa hahita tsara kokoa na hiverina any Pakistana.
Tsy afa-po tamin'ny toe-javatra mihitsy aho. Amin'ny 6 rehefa miala amin'ny birao dia mila minitra 45 ho antsika izahay. Tetezana iray izay tsy maintsy niampita anay sy niditra tao Dubai avy any Sharjah. Noho ny ora fiasan'ny pejiny dia nahatonga azy ho mahery setra ho an'ny mpampihorohoro isan'andro. Ankehitriny raha tsy afa-po tanteraka aho dia ny fifankahazoan-kevitra rehetra no lasa ratsy. Ny fahatsapana tsara momba ny UAE dia nandoto. Misy foana ny enta-mavesatra entintsika alohan'ny hahombiazantsika. Heveriko fa tsy ampy matotra aho hahatakatra izany. Na izany aza, ny alakamisy izay andro fiasana farany tamin'ny herinandro dia te-handany faran'ny herinandro niaraka tamin'ireo miaramilako tany Abou Dhabi aho.
Niverina tany Abu Dhabi Niresaka momba ny toe-draharaha miaraka amin'ny mpampiantrano ahy sy ny fianakaviako any Pakistana aho. Fantatry ny tompon'andraikitra fa mitranga izany dia nanolo-kevitra ahy izy ireo hitondra izany mandritra ny fotoana fohy, ny zavatra dia ho tsara kokoa. Raha mbola niaina ny traikefa niainako taloha momba ny olana mikasika ny asa aho dia tsy te hihaino azy ireo aho, ny fianakaviako niverina tany Pakistana dia nanohana ny fanapahan-kevitro hiverina. Tsy maintsy nitady asa aho tamin'ny fiverenako, vonona ny handray izany loza izany aho satria fantatro fa ny fianakaviako dia teo an-damosiko. Ny fahasamihafana sy fahasamihafana tokana eo amin'ny fiainana ao Pakistan sy Dubai dia ny fianakaviana. Nisy olona niteny raha te handeha haingam-pandeha fotsiny ianao fa raha handeha ela dia miara-mandeha. I UAE no dia lavitra ahy. Tsy voaomana tanteraka aho. Nanapa-kevitra ny hiverina aho.
Taoriana kelin'ny herintaona, naheno aho fa ny orinasa izay nanolorana asa dia nohidiana fa ny fanapahan-kevitry ny fanolanana ny tolotra dia marina. Ao amin'ny toekarena mitombo haingana toy ny orinasa UAE miasa sy manakaiky haingana.
Eto aho dia voatery hanonona mpamily fiarakaretsaka efa hatry ny ela avy any Pakistana ao Abu Dhabi, izay nanondro ny hazo eny amoron-jiro teny an-dalana nandritra ny dia iray, ka namboarinay haingana tamin'ny Ramadan anay izany. Miarahaba ny herim-pon'ilay olona nanapa-kevitra ny handao ny fianakaviako aho ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fanovana ny UAE izay ankehitriny. Niverina aho taorian'ny 2 volana nanaovako ny dia. Na dia naveriko indroa aza ny daty fivoahako indroa amin'ny fanantenana mba hahazoana zavatra mendrika kanefa very maina izany. Taorian'ny fiverenako, tsy nanakivy ahy na iza na iza izay nanontany ahy momba ny Emirà Arabo mitambatra aho fa nino foana fa izany no anjarako ary mety tsy ho an'ny rehetra. Tokony hamporisihina ny tsirairay haka ny fahafahana hiaina ny nofinofiny. Nolazaiko azy ireo fa ny fahavaratra dia tsy fotoana tsara hanaovana fikarohana. Ataovy izany nanomboka tamin'ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa.
Amin'ny fiverenako UAE dia tena malala-tanana mba hanome ahy ny fanomezam-pahasoavana sy ny fahalalahan-tanana indray amin'ny endrika mpiasa mpiasan'ny fifindra-monina izay mamela ahy handalo, na dia eo aza ny andro farany amin'ny fanamarinana visa. Nanam-potoana handinihan-tena izy ireo saingy navelany handao ny firenena amim-boninahitra.
Taorian'ny taona 11 dia mihevitra aho fa tsara kokoa ho ahy ny mijanona fa ny tsara indrindra ho ahy hiverenako. Nanomboka nahita ny fiainana aho tamin'ny fomba mazava kokoa sy ny fanapahan-kevitra. Nanao fiovana maro teo amin'ny fiainako manokana aho ary niverina tany amin'ny fiainako. Fantatro fa tsy afaka manarona ny androm-pikatrohan'ny 2 volana feno amin'ny zava-mitranga amin'ny teny manodidina ny 5000 aho fa mbola nanoratra ny zavatra tsaroako. Nanoratra ny rehetra aho ho lasa ampahany amin'ny tantara. Amin'ny taona maro ho avy dia mety haverina indray ity tantara adino ity. Azoko antoka fa ho vakiana sy ho lesona ny tantarako. Amin'izany no hahatsiarovako na dia efa tsy misy intsony aza. Ny asa soratro dia mety hahatonga ahy ho mpahay tantara izay nahita ny UAE tamin'ny fomba fijery samihafa.
Misaotra, UAE ianao dia hotsaroana mandrakariva ho mpampianatra lehibe sy mpanolo-tsaina. Enga anie ka hitombo hatrany hatrany ny nofinofin'ny olona.
Ny fitsangatsaran'ny asa dia ampahany 2 miaraka amin'i Antony Raj Jayamani. Nahavita nifantoka tamin'ny fitadiavana asa izy ary afaka nahazo asa teo amin'io sehatra io.